VEHIVAVY MATY TANY AN-TRANO FANDIHIZANA : Fijanonan’ny fo tampoka hatreto no voalaza fa antony
Vehivavy iray no nitambotsotra tampoka teo am-pandihizana ny alin’ny sabotsy teo, tamin’ny 11 ora tany ho any teto Mahajanga. 11 mars 2019
Niala voly niaraka tamin’ireo namany, tany amin’ny trano fandihizana izy tamin’izany. Naterina teny amin’ny SOS medecins izy, dia nalefan’ ireo mpitsabo tao tany amin’ny hopitaly PzaGa, ary efa maty no tonga tany.
Rehefa maty tsy notsaboina tao amin’ny hopitaly moa dia ny BMH no manao fizahana sy fanamarinana ny fahafatesana. Nantsoina ny BMH hijery azy, ary tonga tany ny alatsinainy tamin’ny 9 ora maraina. Araka ny nambaran’ny dokotera Hyacinthe dia fahafatesana tampoka no nahazo ity vehivavy ity, nijanona tampoka ny fony.
Noho ny fahitana rora nivoaka tamin’ ny vavany moa dia nilaza avy hatrany ny nahita fa tratran’ ny fanapoizinana ity tovovavy ity. Niely avy hatrany ny vaovao teny amin’ny tambajotra sosialy. Nambarany ihany koa fa dinihina an-tsakany sy an-davany ny vatan’ilay namoy ny ainy, ka io fahafatesana tampoka io no hitan’izy ireo hatreto fa nahafaty azy. Araka ny nambaran’ireo dokotera dia mbola tsy mahita porofo ny fanapoizinana izy ireo hatreto ary mbola manao ny fanadihadiana. 35 taona ity vehivavy nindaosin’ny fahafatesana ity ary manan-janaka iray. Entina halevina any Maintirano ny vatana mangatsiakany.